Maxmaed Cumar Carte, ayaa gudoomiyay shir Guddiga Suggida Amniga Doorashooyinka (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Maxmaed Cumar Carte, ayaa gudoomiyay shir Guddiga Suggida Amniga Doorashooyinka (Daawo Sawirada)
Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxmaed Cumar Carte, ayaa gudoomiyay shir Guddiga Suggida Amniga Doorashooyinka ee Qaranka oo looga hadlayay qabashada doorashada Madaxweynaha.
Waxaa ka soo qaybgalay Wasiirada Cadaaladda iyo Amniga, Guddiga Baarlamaanka u qaabilsan doorashada Madaxweynaha, Taliye-yasha ciidanka qalabka sida, Ku-Xigeenka Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya iyo Taliyaha ciidanka AMISOM.
Carte, ayaa Saraakiisha uga mahadceliyay sida ay uga soo shaqeeyeen sugida amniga doorashooyiinkii labada Aqal ee dalka ka dhacday, geesta kalena sheegay in la sii wado wada shaqeynta joogtada ah ee dhexmarta Ciidamada Qaranka iyo AMISOM.
“Hawl muhiim u ah Soomaaliya ayaad qabateen dhamaantiin oo dalka u soo hoysay amaan; waxa loo baahan yahay in aad sii laba laabtaan wadashaqaynta idinka dhaxeysa si la isaga kaashado ka hortagga cadowga.” Maxamed Cumar Carte.
Maxamed Cumar Carte, ayaa Saraakiisha kala hadlay suggida amniga musharixiinta iyo goobta doorashada ay ka dhaceyso.
“Waxaa idinku waajiba feejignaan dheeri ah si aad u sugtaan amniga Musharixiinta iyo goobta doorashada lagu qabanayo taasoo aan idinku boorinayo in aad uga soo dhalaashaan si wanaagsan.” Ayuu yiri Carte.
Carte, ayaa hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay baaq uu u diray shacbiga Soomaaliyeed, oo uu kaga codsaday in ay ciidanka amniga la shaqeeyaan si doorashada Madaxweynaha ay ugu qabsoonto si nabad ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo saakay ka dhoofay Magaalada Muqdisho